Tribute kwaWabeladio Payi, umsunguli wokubhala uMandombe - i-Afrikhepri Fondation
Tribute to Wabeladio Payi, umsunguli wokubhala waseMandombe
Wu-abeladio Payi waseCongo-Kinshasa nguyena owasungula umbhalo waseMandombe. Igama elithi Mandombe, ngolimi lwesiKongo, lisho "lokho okumnyama". I-adventure yalokhu kubhala yaqala ngo-1978.
Ngo-1982, uWabeladio Payi wathola ilungelo lobunikazi n ° 2505/82 eMnyangweni Wezimboni Nezohwebo weRiphabhulikhi yaseZaire (manje eyiDemocratic Republic of Congo noma iCongo-Kinshasa) ngalokhu kubhala. Kodwa-ke, kuze kwaba ngo-1994 lapho lo mbhalo wethulwa ngokusemthethweni emphakathini.
UMandombe unikela, phakathi kwezinye izinto, ekubhaleni isiKikongo, isiLingala, isiTchiluba nesiSwahili, nezinye izilimi eziningi zaseCentral kanye naseNingizimu ne-Afrika. Lo msebenzi wokubhala wenziwa yi-Academy yaseMandombe.
Bangaphezu kuka-540 abantu asebevele bafunda lo mbhalo ezikhungweni zokuqeqesha ezibizwa nge- "Nsanda" eCentral Africa, kanye nabantu abangaphezu kuka-000 kulo lonke elaseNtshonalanga Yurophu naseNyakatho Melika.
Ngenxa yokubaluleka kwayo okukhulayo, uhlelo lokusebenzisa ikhompyutha lokubhala iMandombe lwakhiwa. Lolu hlelo lokusebenza lwalubizwa nge- "Lundombe". Futhi, kungenzeka yini ukusebenzisa isoftware yokucubungula amagama phakathi kwabanye, ukubhala iMandombe kusetshenziswa i-elekthronikhi. Isayithi http://lundombe.zaya-dio.com, kuphela kwisikripthi se-Mandombe, siyakufakazela.
Wabeladio Payi, umsunguli wombhalo waseMandombe wadlula emhlabeni ngomhlaka 4 Ephreli 2013.
Le fomula yamandla ibulala zonke izifo futhi ibuyisela impilo